UVera Alentova ngaphambi nangemva kweeplastiki 2017, isithombe, ubugcisa kunye nobomi bomntu
Emva kokukhululwa kwefilimu eyaziwayo "UMoscow akakholelwa kwiinyembezi," uVera Alentova uvukile udumo. Ewe, phambi kwefilimu eqhelekileyo, u-Alentov wayesele eyaziwayo kubabukeli kwiifilimu nakwiivenkile zemidlalo. Kodwa emva kwendima kaKatya Tikhomirova ukuba umdlali we-actress wafunda ukuba yintoni into yokudumisa. Izigidi zeManyano zabaseManyanini ziyamkela ubuhle kunye namandla omoya owona mgangatho oyintloko enzima. Umfanekiso kaKatya Tikhomirova, ngokuphumelelayo owenziwe ngetalente kunye nedatha yangaphandle ye-actress, uye waba yinkolo kwisizukulwana esipheleleyo sabesetyhini baseSoviet. Ngefestile kwangoko wangena kumzobo "onjalo we-Alentovoy", kwaye umdlali wezobugcisa ngokwakhe uthatha indawo eluhlu lwee-cinemas ezihle kakhulu kunye nezesisindo. Kwaye nangona kunjalo uAlentova wadlala uCatherine iminyaka engama-36. Namhlanje, umculi oneminyaka engama-75 ubudala uyaqhubeka "ukugcina uphawu" ngenxa yokuhlinzwa ngoplastiki, nangona ezinye zazo zingabizwa ngokuba yimpumelelo. Ngenxa yeeplastiki zakutshanje (2016), amaphephandaba athi ingxelo yeVera Alentova yayigula kakhulu. Kodwa ngokweendaba zakutshanje impilo ye-actress iyinto eqhelekileyo, oku kuqinisekiswa kwintluphelwano kunye nentombi yomdlali we-actress uJulia Menshova. Ngolwazi, ubomi bomntu, intsapho kunye nendlela namhlanje ibonakala ngayo njengeVera Alentova (umfanekiso wesigcina emva kweeplastikhi) kwaye siya kuthetha ngakumbi.
Vera Alentova - i-biography kunye nobomi bomntu bomdlali we-actress namhlanje
Ubuntwana kunye nolutsha lweenkwenkwezi ezizayo zeSoviet screen yeVera Alentova babenzima. Intombazana yazalwa phakathi kweMfazwe Enkulu yePatriotic - ngoFebhuwari 21, 1942 kwisixeko saseKotlas, kwingingqi yaseArkhangelsk. Njengazo zonke izahlulo, wayesazi ngokulamba kunye nokunyuswa kwexesha lokulwa emva kwemfa kwasebuncinaneni. Xa le ntombazana yayingeneminyaka engama-4 ubudala, uYise Valentin Bykov wafa. Imfundo kaVera yayisezinxineni zikamama wakhe - u-Irina Alentova. Kwaye kunye naye uVerochka waya kwizalamane zase-Ukraine, ngoko bafudukela e-Uzbekistan, baya kwiAltai ... Naphezu kwemizamo yowesifazane ukuba amnike yonke into eyimfuneko, i-Alentovs yayihlala ngaphezu kokuthobeka. Ngethamsanqa, ukunyanzeliswa akuzange kuphulukise isimo sengqondo sikaVera ngokubhekiselele kubomi kwaye sasibe sisilumko esilungileyo. Ngokukodwa ezi mpawu zazisebenzisayo kuye ngexesha apho, ngokungafani nomnqweno kaMama, uVera waya kwisikolo sezonyango kunokuba afike esikolweni. Uphumelele ngempumelelo ukhuphiswano kwiqela kwaye kamva wangena eMoscow School-Studio ye-Moscow Art Theater. Nemirovich-Danchenko.
Izinto ezivela kwi-biographie yaseVera Alentova: ubomi bomntu bomdlali we-actress namhlanje
Isigqibo sokufunda kwi-Moscow Art Theatre saba nesithandwa kuVera: apha akafumanga kuphela isikolo esisebenza kakuhle, kodwa wadibana nomyeni wakhe. Ngo-Vladimir Menshov, inkwenkwezi yekhamera yakuza yangena ngo-1962, njengomfundi wesibini weminyaka. Abaninzi baqikelele isibini esivakelweyo somtshato, kodwa umtshato weMenchov kunye neAlentovoy usinda kwiimvavanyo ezininzi, kuquka ukungabi namali kunye nozuko. Okwangoku, isi sibini kunye iminyaka engama-55-irekhodi lokwenene labantu bokudala. Mhlawumbi imfihlelo yentsapho yabo iphila ixesha elide e-Alentova yaba yi-Menchova kungekhona nje umfazi othandekayo, kodwa kunye ne-museum. Uye wadlala ngobuchule kwimifanekiso emininzi yomlawuli wakhe wendoda.
UVera Alentova - isithombe ngaphambi nangemva kokugqitywa kokugqibela ebusweni buka-2016
Ukubonakala okuthakazelisayo ngokuyinhloko kugqiba impumelelo yomsebenzi owenzayo. Yingakho abaninzi abadlali bezenzo benza yonke imizamo yokubukeka bebukeka bekhulile. Phakathi kwabo, uVera Alentova, isithunzi sakhe emva kokuhlinzwa ngoplastiki ekugqibeleni ebusweni ngo-2016 wenza inzondo enkulu kwinethiwekhi. Oku akusiyo isibheno sokuqala somdlali weqonga kwiidloji. Ekubeni ngo-1998, u-Alentova wenza isetyhula facelift. Emva koko umphumo wokusebenza wawungaphezulu kunezinto ezilungileyo. Umdlali we-actress waqala ukubonakala encinci kuneminyaka yakhe. UVera Valentinovna wenza i-suspender ephindaphindiweyo ngo-2010 kwaye ngeli xesha i-tabloids zazaliswa zizihloko ezingamnandi. Amajelo agxeka ngokucacileyo ukubukeka kancinci kwe-actrice, ocacileyo ngokugqithiseleyo nge-lip augmentation and fillers.
Ifoto yeVera Alentova ngaphambi nangemva kokugqitywa kokugqibela ebusweni, eyenziwe ngo-2016
Kwaphela iminyaka emithandathu kuphela, kwaye u-Alentova waphinde wawa phantsi kwe-scalpel. Ngeli xesha usebenze ebusweni lungabizwa ngokunyanisekileyo. Kwiifoto zokugqibela kubonakala ngokucacileyo ukuba iliso elinye likaVera Valentinovna alivaliwe ngokupheleleyo, kwaye iindawo ezizaliswe yi-gel ezihlathini zimeleleke ebusweni. Ukongeza, i-cheekbones yomculi ibukeka ibuhlungu, kwaye iinqununu zomlomo wayo zinika umdlali wekhenkethi ukujonga okhathele.
UVera Alentova emva kokuhlinzwa okwenziwa ngeplastiki - okwenzekile ebusweni bomdlali
Ngoko kwenzeka ntoni ebusweni be-actress enkulu uVera Alentova emva kweeplastiki ezingaphumelelanga? Iingcali zithi ubudala obubi bufanele bubekwe bubungqina beminyaka ehloniphekileyo ye-actress kunye neempazamo zagqirha zeplastiki zangaphambilini. Inyani kukuba yinto yokuqala yokuhlinzwa eplastiki eyenza ngokubanzi igalelo lezinyathelo zokungenelela ezilandelayo. Ukongezelela, xa uneminyaka yobudala, ukunyaniseka kwesikhumba kuncitshiswe kakhulu, nto leyo, kunye kunye nesistim ejongene nokuphakanyiswa ubuso, inika umphumo "we-mask elula". Ngesinye isihlandlo, esinye isithonjana se-Soviet cinema sadibana neengxaki ezifanayo - uLyudmila Gurchenko. Abanye abagxekayo baqaphele ukuba kufana nokufana kwezi zixhobo ezidumileyo namhlanje.
Yintoni eyenzeka kumdlali we-actress u-Vera Alentova emva kokuhlinzwa okwenziwa ngeplastiki kwintsebenzo
Ukongeza kwiplastiki yesithathu, kubonakala ukuba i-Alentova ithathelwa "iintlobo zobuhle" ezahlukeneyo. Kungenzeka ukuba iVera Valentinovna injobe i-Botox ibe yimihla engenalabial kwaye injected hyaluronic acid emlonyeni. Kuyaziwa ukuba enye yeempembelelo zecala kule nkqubo i-paralysis ye-facial muscle. Ngako oko ukutshatyalaliswa ngokugqithisileyo komdlali, kunye ne "frozen".
UVera Alentova wabulala kakhulu-iindaba zakamuva ezivela ebomini be-actress
Kuyinto engabonakaliyo yobuso bukaVera Alentova obakhokelela kwiindlebe zokugqibela ukuba ugula olunzulu luye lwafika ebomini bomdlali. Iindaba zokuqala ezinjalo zavela emva kokuba u-Alentova anqabile ebusweni malunga nehlobo lonke. Ngokuqala kwexesha elitsha lezemidlalo, umdlali wezahlulo wabuyela kumgca, ukhululekile kwaye unxibile. Nangona kunjalo, ukubonakala akuzange kuthinte umgangatho weendima zayo.
Sisiphi isigulo esibi kakhulu u-Vera Alentova owenza umdlalo, iindaba zakamuva
Umdlali we-actress ngokwakhe akazange aqinisekise iindaba ezikuthi uhlaselwa sisifo esibi. Kwesinye intlanganiso yakhe yokugqibela ndlebe noVera Alentova wachaza nje ukuba wayegula ehlotyeni ka-2017, kodwa akazange acacise oko kanye. Kwakhona, ezinye iindawo ezisondeleyo kwintsapho yaseVladimir Men'shov yabelana ngolwazi lokuba ngoJune umkakhe wayengozini enkulu. Nangona kunjalo, le ntombi ye-actress uJulia Menshova iphikisa le ngcaciso. Inokwenzeka ukuba, i-Erentova Vera (ngoku ikopi yokugqibela emva kokusebenza ngentla) ikhangeleka "engafanelekanga" yiplastiki engaphumelelanga, sele isesithathu kwi-biography yayo. Sekunjalo, iminyaka ehloniphekileyo, kwaye umdlali we-actress uguqule iminyaka engama-75 ubudala, uzive evakalelwa.
Indlela yokwenza umntwana afunde kakuhle?
Ukungathinteki kakubi kwi-aesthetics ye-liposuction
Iikhokheki ngeeblueberries ngaphandle kwamaqanda
I-Snack evela kwintshi kunye nemifuno entsha
Inkomo kunye nelayisi kunye nemifuno
Iipropati ezisebenzayo zekhofi emnyama
I-autumn melancholy kunye nendlela yokulwa nayo